Hooyo Safiya: “Waa 60 jir markii labaad ayey Jaamacadda dhammeesay” – Kismaayo24 News Agency Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/8/7/9/kismaayo24.com/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
Hooyo Safiya: “Waa 60 jir markii labaad ayey Jaamacadda dhammeesay”
by admin 30th August 2016 019
Magaalada Garoowe ee xarunta Puntland, waxaa toddobaadkan lagu qabtay xaflad ay ku qalinjabinayaan Arday dhammeesatay waxbarashada heerka koowaad ee Jaamacadda ama (Bachelor Degree).
Ardaydaas waxaa ka mid ahayd Hooyo Safiya Jaamac Garyare oo ah 60 jir oo markii labaad qaaday shahaadada heerka koowaad ee Jaamacadda.
Hooyadan ayaa ka mid ahayd 45 aday oo dhammeysatay kuliyadda Sharciga iyo Qaanuunka ee JaamacaddaPuntland state university (PSU) ee magaalada Garoowe.
Maamulka Jaamacadda iyo Macallimiinta Jaamacadda PSU ayaa isla qiray Safiyo Jaamac in ay ahayd qof dadaal badan oo aan marna ka niyad jabin inay ka harto waxbarasheeda, waana tan keentay inay hadda dhammaysato waxbarashadda Jamacadda iyada oo ku faraxsan inay gaartay himiladeedii ay ku taameysay muddo badan.
Si kastaba, sidda laga sheegay munaasabadda Hooyo Safiya ayaa noqotay ardayadii ugu horreysay oo buugga dhamaysa marka loo eego Ardeydii kale ee ay isku fasalka ahaayeen.
“Walaahi mala qiyaasi karo sidda uu yahay dareenkeyga maadama hooyadeey aan jeclahay maanta ka qalinjabisay Jaamacadda PSU, annaga ayey wax na bartay maantana iyada ayaa waxbaratay oo ilaaa heer Jaamacad gaartay waa farxad faraxad kale lagu daray” siddaas ayey tiri Ayaan Maxamed oo ah gabar ay dhashay hooyo Safiya oo u warrantay Soomaalikabe.com.
Sidda ehelka Safiya Jaamac u sheegeen Soomaalikabe.com, hooyadan waxay horrey uga qalinjabisay Jaamacadda Ummadda ee Soomaaliya iyadoo sidoo kale Agaasime Guud ka soo noqotay wakaaladda dhirta iyo daakha ee dowladii kacaanka.
Hooyo Safiya hadda waxay la shaqeysaa wasaaradda haweenka ee Puntland, waana Hooyo labo gabdhood kuwaasoo iyagana waxbartay oo aqoon leh.
Akhriste, guusha Hooyo Safiya waxay meesha ka saareysaa hadalada Soomaalida ay dhahaan ee ah qof weyn waxbo ma baran karo waa tii horre loo dhahay Waxbarashadu da’ ma lahan.
Haddaba, Soomaalikabe.com waxay Hambalyo u direysaa Hooyo Safiyo guusha ay gaartay iyo dhammaan ardaydii kale ee ka qalinjabiyey Jaamacadda PSU.
Afaheyeen Jubbaland Cabdinasir Seerar iyo Xubno la socday oo Kismaayo dib ugu so labtay kana warbixiyay…
Muqdishooy horumarka ha hakin W/Q: Mahad Koronto
Ciidamadda Xeebaa dalka Taliyaaniga oo Tahribayaal Somalia ah badbaadiyey.
XOG : Xasan Sheekh Iyo Axmed Madoobe oo gorada iskula jira, xilli Madaxweynaha uu ka cagajiidaayo ka qeyb galka Shirka Kismaayo loo Madlanyahay Inuu ka furmo.